काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था झन् कडा – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था झन् कडा
By Digital Khabar Last updated Aug 12, 2019 25 0
एजेन्सी– सोमवार सुरु हुने इद अल अधा पर्वको पूर्व सन्ध्यादेखि नै काश्मिरका सबैजसो मस्जिदहरुमा सुरक्षाव्यवस्था कडा बनाइएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस हिमाली क्षेत्रमा रहेका ठूला जामा मस्जिदहरुलाई बन्द गर्ने आदेश दिइएको छ । स–साना मस्जिदहरु मात्र खुल्ला राखिएको र ती मस्जिदमा ठूलो भिडभाड नभएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।
गएको दुई दिनयता यहाँ कर्फ्यू खुकुलो पारिएको बताइएको थियो । तर यस पर्वका अवसरमा हुनसक्ने हिंसालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको जनाइएको छ । जम्मु काश्मिरलाई नियन्त्रण लगाई केन्द्र सरकारको मातहतमा राख्ने कदमको विरोध भएका कारण काश्मिरमा आठ दिनदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
मुसलमानको बाहुल्य भएको जम्मू् काश्मिर क्षेत्रमा खटाइएका दशौँ हजार सुरक्षाकर्मीहरू गस्तीमा रहेका र फोन लाइन तथा इन्टरनेट काटिएको एक साता भएको छ । गत बिहीवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मिीरका नागरिकलाई इद उल अधा पर्व मनाउन सहज पारिदिने वाचा गरेका थिए ।
]जम्मू काश्मिरलाई विशेष महत्व दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने भारत सरकारको निर्णयपछि काश्मिरमा विरोध भइ आएको छ । भारत सरकारको यो कदमपछि विश्वको आँखा भारत प्रशासित काश्मिरको अवस्थाप्रति केन्द्रित रहेको छ ।
मुसमान समूदायको ठूलो पर्व इदको लागि भारतको नियन्त्रणमा रहेको काश्मिर प्रशासनले आइतबार कतिपय इलाकामा कर्फ्यू खुकुलो पारेको थियो । कर्फ्यू खुकुलो पारेपछि सडकमा केही चहलपहल देखिएको सोमवारको इदको किनमेल गर्न सबै जना बाहिर निस्किएका थिए । त्यस प्रयोजनका लागि सवारी साधन पनि केही खुकुलो पारिएको थियो ।
आइतवार दिउँसोको १२ बजेसम्म सडकमा नागरिक र सवारी साधनको आवतजावत बढेको काश्मिरबाट प्राप्त भएका समाचारमा जनाइएको थियो । आइतबार कतिपय स्थानमा ट्राफिक जाम पनि भएको बताइएको थियो । तर १२ बजेपछि अचानक सुरक्षा व्यवस्थामा कडा गरिएको र मानिसको चहलपहल स्वात्तै घटेको थियो । त्यहाँ अहिले पनि सञ्चार तथा सूचनाका साधनहरु पनि प्राय बन्द छन् ।
निरन्तरको कफ्र्यू र सञ्चारको अभावमा त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा केही सूचना प्राप्त हुन नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।
पूर्वसरकारी कर्मचारीको ‘सुसाइड नोट’ : अख्तियार प्रमुखको आयु २०० वर्ष होस् !
कार्यशाला गर्दै चलचित्र त्रिकार संघ
घिसिङको लेखन र ओझाको सम्पादन रहेको खेल जीत मनोविज्ञान सार्वजनिक
कागेश्वरी मनहरानगरपालिका नगर प्रमुखद्धारा बिजया दशमीको शुभकामना सन्देश ब्यक्त